सल्यानमा लाठी प्रहार गरि एक जनाको हत्या « Farakkon
सल्यानमा लाठी प्रहार गरि एक जनाको हत्या
दाङ, वैशाख १६ । सल्यानमा लाठी प्रहार गरि एकजनाको हत्या भएको छ । कपुरकोट गाउँपालिका वडा नं. ६ खोली गाउँ निवासी ३९ बर्षीय श्याम भनिने फौदबहादुर भण्डारीको हत्या भएको छ । भण्डारीलाई लाठी प्रहार गरि हत्या गरेको अभियोगमा कपुरकोट गाउँपालिका वडा नं. ५ का २५ बर्षीय निर्मल बुढा पक्राउ परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एवं डिएसपी विरेन्द्र शाहीका अनुसार बुढाले भण्डारीलाई बैशाख ४ गते बेलुका ९ बजेतिर टाउकोमा लाठीले प्रहार गरि हत्या गरेका थिए । घटना लगतै फरार बुढालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अदालतको आदेशमा इप्रका लुहामको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालिएको प्रहरी निरिक्षक मानबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
भण्डारी र बुढा दुबैजना संगै रोजगारीको सिलसिलामा भारतको चन्डिगढ रहँदाको तिक्तताको आधारमा बुढाले भण्डारीको हत्या गरेको भन्ने खुल्न आएको प्रहरीले बताएको छ । भारतमा संगै होटेलमा काम गर्ने क्रममा मृतक भण्डारीले बुढालाई अपमान जनक व्यवहार गर्ने गरेको हुँदा त्यही रिसिवी साँध्न बुढाले लाठीले हानेर भण्डारीको हत्या गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
‘लामो समय भारतमा बसेका भण्डारी नयाँ वर्षको अवसरमा सल्यानस्थित घर आएपछि उनीहरुको बीचमा भेट हुँदा त्यही कुरालाई विवाद भएछ,’ डिएसपी शाहीले भने ‘ त्यही भएरै बुढाले योजना बनाएर भण्डारीलाई लाठीले टाउको लगाएत शरिरका विभिन्न भागमा प्रहार गरि हत्या गरेको देखिन आएको छ।’ घटना वारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ ।